Written by shwewar | Print	| Email	| Hits: 7627
Web Admin	2019-08-22 11:22:16
၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ မြင်းခြံမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဌာနနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ တွေ့ဆုံပွဲကို သြဂုတ်လ ၂၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက ကျင်းပသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင်...
Web Admin	2019-06-26 13:54:26
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ရက် ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့် ငါ့သရောက်မြို့ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ဆည် အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)တို့ ပူးပေါင်းကာ ဇွန်လ ၂၅ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်ဦးခရိုင်၊ ငါ့သရောက်မြို့ ဆည်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း (ခွဲ) ဗိုလ်ချုပ်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ရှေးဦးစွာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစော၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်...
“ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး” ပြည်သူ့စကားဝိုင်း ကျင်းပရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး
Web Admin	2019-06-14 12:02:07
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ရက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြစ်သားမြို့နယ်တွင်“ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး”ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြည်သူ့စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ဒိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နတ်လွှဲကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ၌ ဇွန် ၂၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ကျင်းပ မည်ဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန၌ ဇွန် ၁၂ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့စကားဝိုင်း ကျင်းပနိုင်ရေး...
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ပြည်သူ့စကားဝိုင်း ကျင်းပ
Web Admin	2019-06-13 11:06:54
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ရက် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ပြည်သူ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဇွန် ၁၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ကျောက်ဆည်မြို့ရန်ဘက်လိုကျေးရွာ ရွာလည်ဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပရာ ရှေးဦးစွာ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အုန်းကြည်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန မြို့နယ်ဦးစီးမှူး ဒေါ်ခင်စောလွင်က ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို...
Web Admin	2019-01-21 10:45:40
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀ ရက် အမရပူရမြို့နယ် ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနသည် လူထုအခြေပြုလုပ်ငန်း ပြည်သူ့စကားဝိုင်းများ ကျင်းပဆောင်ရွက်ရာတွင် ဇန်န၀ါရီလ ၁၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် “လူငယ်နှင့်စာပေ”ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြည်သူ့စကားဝိုင်းကို မြို့မအထက်တန်းကျောင်းအမှတ်(၂) မိဘအရိပ်-၂...